Fitsipika 3 ho an'ny lehilahy kristianina ihany
Ho an'ny lehilahy kristiana ihany - Fitsipika 3 ho velona
Manohy ny loharanom-pampianaranay ho an'ny lehilahy Kristiana i Jack Zavada avy amin'ny Inspiration-for-Singles.com dia mamerina ny mpamaky antsika ho any Nazareta handinika ny fiainan'i Joseph, ny mpandrafitra, ary ny zanany lahy, Jesoa . Teny an-dàlana dia nanondro i Jack araka ny fomba mahomby, fitsipika telo ho an'ny lehilahy hiaina. Mandinika ireo fitaovana nomen'Andriamanitra azy koa izy, afaka mampiasa mba hanorenana ny fiainam-pinoana ara-panahy.
Fantatry ny olona rehetra fa mpandrafitra i Joseph , rain'i Josefa , ary antsoin'i Matio hoe "olo-marina" izy, saingy tsy dia misaintsaina ny fahendrena nomeny an'i Jesosy isika .
Tamin'ny andro fahiny, dia fanaon'ny zazalahy iray ny nanaraka ny rainy tamin'ny varotra nataony. Nanao ny asany tany amin'ny tanàna kely misy an'i Nazareta i Josefa , saingy angamba niasa tany amin'ireo tanàna teo akaiky ihany koa izy.
Ireo haitao arahôlôgy vao haingana tao amin'ny tanànan'i Zippori, tanàna any Galilea fahiny, izay efatra kilaometatra avy any Nazareta, dia naneho fa ny trano lehibe dia natao tao amin'ity renivohitra ity taloha.
Zippori, antsoina hoe Sepphoris amin'ny teny grika, dia naverin'i Heroda Antipasy tanteraka , nandritra ireo taona niasany nataon'i Josefa. Azo inoana fa i Joseph sy ilay zatovo Jesosy dia nanao ny fandehan'ny ora hanampiana ny fanorenana ny tanàna.
Fotoana maro teo amin'ny fiainan'i Jesoa, rehefa niverina tany amin'ny tanànany any Nazareta tanànany izy mba hampianatra ny filazantsara, dia tsy afaka namakivaky ny fiainany taloha ny olona tao amin'ny synagoga ka nanontany hoe: "Tsy ity ve ilay mpandrafitra?" (Marka 6: 3).
Mpandrafitra i Jesosy, ka tsy maintsy nianatra zavatra maro momba ny fivarotana hazo avy tamin'i Josefa.
Na dia niova be aza ny fitaovana sy ny teknika nandritra ireo 2 000 taona lasa, dia fitsipika tsotra telo izay niainan'i Joseph tamin'ny mbola mitana ny toerany amin'izao fotoana izao.
1 - Mora indroa, tapaho indray
Vitsy kely ny hazo tany Israely fahiny. Josefa sy ny mpianany dia tsy afaka nanao fahadisoana. Nianatra nitandrina izy ireo, niandrandra ny vokatry ny zavatra rehetra nataony.
Fitsipika hentitra ho an'ny fiainantsika koa izany.
Amin'ny maha-lehilahy kristianina antsika, dia mila mitandrina amin'ny fitondran-tenantsika isika. Mijery ny olona. Ireo tsy mpino dia mitsara ny Kristianisma amin'ny fomba fihetsika ataontsika, ary afaka manintona azy ireo amin'ny finoana isika na mandroaka azy ireo.
Ny fiheverana mialoha dia manakana ny fahasahiranana maro. Tokony handinihantsika ny fandaniantsika amin'ny fidiram-bola ary tsy mihoatra an'izany. Tokony handrefy ny fahasalamantsika ara-batana isika ary hanao dingana arovana mba hiarovana azy. Ary, tokony handanjalanja ny fivoarantsika ara-panahy isika indraindray ary miasa mba hampitombo azy. Tahaka ny hazo tao Israely fahiny, voafetra ny loharanonay, ka tokony hiezaka mafy izahay hampiasa azy ireo amim-pahendrena.
2 - Ampiasao ny fitaovana tsara ho an'ny Joba
Tsy nanandrana nanamboatra kitay na nanamboatra lavaka tamin'ny famaky i Joseph. Ny mpandrafitra tsirairay dia manana fitaovana manokana ho an'ny asa tsirairay.
Toy izany koa amintsika. Aza mampiasa fahatezerana rehefa antsoina ny fahatakarana. Aza mampiasa tsy firaharahiana rehefa ilaina ny famporisihana. Azontsika atao ny manangana olona na manimba azy ireo, miankina amin'ny fitaovana ampiasaintsika.
Nanome fanantenana ny olona i Jesosy. Tsy menatra ny haneho fitiavana sy fangorahana izy. Mpitondra izy tamin'ny fampiasana ny fitaovana mety, ary tokony ho toy izany koa ny fianarany.
3 - Karakarao ny fitaovanao ary hikarakara anao izy ireo
Ny fiainam-pianakavian'i Joseph dia miankina amin'ny fitaovany.
Isika kristiana dia manana fitaovana ampiasain'ny mpampiasa antsika, na ordinatera na angona misy fiantraikany, ary manana andraikitra isika hikarakara azy ireo toy ny hoe antsika.
Manana ny fitaovam- pivavahana , ny fisaintsainana, ny fifadian-kanina , ny fiankohofana ary ny fiderana isika. Ny fitaovana manan-danja indrindra, mazava ho azy, dia ny Baiboly. Raha asaintsika lalina ao an-tsaintsika ny fahamarinana ao anatiny dia avelao hikarakara antsika koa izy ireo.
Ao amin'ny tenan'i Kristy, ny lehilahy kristiana rehetra dia mpandrafitra asa an-tsitrapo. Tahaka an'i Joseph , dia afaka manoro ny fianarantsika isika - ireo zanakalahy, zanakavavintsika, namana ary havana - mampianatra azy ireo fahaiza-manao handalinana ny finoana amin'ny taranaka aorian 'izy ireo. Arakaraka ny hianarantsika bebe kokoa momba ny finoantsika ny mpampianatra tsara kokoa ho antsika.
Andriamanitra dia nanome antsika ireo fitaovana sy loharano ilaintsika. Na any amin'ny toeram-pandraharahana na ao an-trano na any am-piasana ianao dia miasa foana.
Miasa ho an'Andriamanitra amin'ny lohanao, ny tananao, ary ny fonao ary tsy afaka ny tsy mety diso ianao.
Avy amin'i Jack Zavada ho an'ny lehilahy Kristiana ihany koa:
• Ny fanapahan-kevitra henjana indrindra
• Mirehareha amin'ny fangatahana fanampiana
• Ahoana ny fomba hanoherana ny tsy fahombiazan'ny fahefana
• Tsy manambady ve ny Ambition?
• Afaka ny ho sambatra ve ny lehilahy kristianina eo amin'ny toeram-piasana?
• Manirery: Toerana ny fanahy
• Ny valinteny kristianina amin'ny fahadisoam-panantenana
• Fotoana hakana ny fako
• Fomba fiainan'ny mahantra sy tsy fantatra
• Hafatra ho an'ny olona tokana
• Fanaporofoana matematika an'Andriamanitra?
Ahoana no hanampiana ireo tsy manan-kialofana?
Tokony hankahala ny ratsy ve aho?
Ny fahatsapana ho manirery: Ny fiovan'ny fanahy
Ny fahatahorana ny Tompo no fiandohan'ny fahendrena
Fitaovam-pahavitrihana mba hitadiavana asa-Toetry ny fiainana
Inona no toe-tsaina tokony hanatonantsika ny fahotana?
Ahoana ny fomba ataonao isan'andro?
Afaka mamaky ny saintsika ve i Satana?
Top Christian Internet Filtration sy ny Accountability Software
Miomana amin'ny fanadinana CCNA
Mandika ny 'As' amin'ny teny Espaniola
Ny tantaran'ny famantaram-potoana fahafito
Tokony Hividy Gymnastics Shoes ve Ianao?
Ny Ady Lehibe Faharoa: Dieppe Raid
Nahoana ny Katolika no mandray ny tokantranony mandritra ny fiombonana?
Fahaizana miantoka indrindra ny mpandahateny rehetra
Ny Nika Revolt
Torolalana ho an'ny fikambanam-piaramanidina Kristiana tsara indrindra manerantany
Ahoana ny fomba fampiasana Shakespeare Quotes
Tontolo lehibe iray lehibe - "Milaza zavatra" miaraka amin'i Christina Aguilera
Mankalazà Espaniola sy Anglisy
Ireo zava-mahagaga lehibe indrindra tamin'ny taona 1990
Inona no atao hoe binomial?
Ny atidoha miankavanana vs Right Brain
Famolavolana toro-hevitra sy teknika: Ahoana no hanoroana tantara
Fanontana momba ny fanontana: fanadihadiana iray manahirana an'i George Orwell amin'ny 'fanokafana'
Gloria in Excelsis Deo: Lahatsary ho an'ity hira Krismasy fahiny ity
Fantaro ilay teny tsotra Japoney "Hai"
Ny fidirana sy ny fanaparitahana ny Black Death tany Eorôpa
Fahatakarana ny Syriana Rebel
Inona avy ny Theory Convergence?
Tantarany: Al Jazeera